Enye-NANTONG CHITSURU IZITHUTHA CO, CO.
Umnyhadala weNtwasahlobo waseTshayina
Umnyhadala wentwasahlobo ngowona msitho ubalulekileyo eTshayina .Ngokuhlwa kwangaphambi koMthendeleko weNtwasahlobo, iintsapho ziyahlangana kwaye zibe nesidlo esikhulu .Kwindawo ezininzi abantu abathanda .....
Ishishini leChitsuruya elasekwa ngoJanuwari, ngo-1996, baxhomekeke kubutyebi bendalo ukuze bafumane iimveliso ezigqwesileyo, benze, bathengise amatya aselwandle athengisiweyo, njl njl.
Ungayenza njani uSukiyaki ekhaya
Kukho kuphela iinyanga ezimbini phambi koNyaka oMtsha kwaye kuqala ukubanda kwaye kubande kakhulu. Nangona kunjalo, kungcono xa sinokonwabela ukutya okushushu kunye nesobho ekhaya xa sonwabela indawo yekhephu ngaphandle ......
Njengoko sonke sisazi, ukuba yi-ciment emuncu, iviniga yenziwe ngeenkozo ezinjenge-sorghum, irayisi, umbona, ingqolowa.sugar kunye notywala. Iviniga yavela phambi kweZhou Dynasty, eyayibizwa ngokuba yi "zuò" kwakudala .....
Umthendeleko weDragon Boat
Namhlanje nguMthendeleko weDragon Boat, ongomnye weyona mibhiyozo ibaluleke kakhulu eTshayina. Ngosuku lwesihlanu lwenyanga yesihlanu rhoqo ngenyanga .....
Yonke injongo-yokubanika-HON TSUYU
Namhlanje, ndingathanda ukwazisa isongo seenjongo zakho kuwe.ibizwa ngokuba ngu-HON TSUYU (CONDeedED SOUP) .kwaye isetyenziswa ngokubanzi eJapan .....